ကမ္ဘာပေါ်တွင် တိုက်ကြီး ၇ တိုက်အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားကြပြီး အဆိုပါ တိုက်ကြီး ၇ တိုက်၏ အမည်များကို အင်္ဂလိပ်လို မှတ်ခေါ်ရာတွင် တိုက်အမည်၏ အရှေ့ဆုံး အက္ခရာနှင့် နောက်ဆုံးပိတ် အက္ခရာတို့မှာ ထူးခြားစွာ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အကြီးမားဆုံး တိုက်မှာ အာရှတိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ဧရိယာစုစုပေါင်းမှာ ၄၃,၈၁၀,၅၈၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၅,၉၁၅,၃၆၀.၃ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ ကုန်းမြေအကျယ်အဝန်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုံးမျှ ရှိကာ ကမ္ဘာ့မြေ၏ ၈.၆ ရာခိုင်နှုံး ရှိသည်ဟုသိရပါသည်။ နိုင်ငံ ၄၂ နိုင်ငံက အာရှတိုက်ဟူသည့် နယ်ပယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိနေပြီး ဒေသကို အလယ်အာရှ(၅နိုင်ငံ)၊အရှေ့အာရှ(၆နိုင်ငံ)၊ အနောက်အာရှ(၁၂နိုင်ငံ)၊ တောင်အာရှ(၈နိုင်ငံ)၊ အရှေ့တောင်အာရှ(၁၁နိုင်ငံ) ဟူ၍ခွဲခြားထားသည်။
ထိုင်ဝမ် (တရုတ်ထိုင်ပေအဖြစ်သာတရုတ်ကခေါ်ပြီး ခွဲထွက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။သို့သော် သီးခြားသံတမန်ဆက်ဆံမှုများ၊ စစ်တပ်၊ အစိုးရ၊ ပြည်သူ၊ နယ်နမိတ်အကျယ်အဝန်း စသည်တို့ရှိသည့်အတွက် ၎င်းအားနိုင်ငံစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားရသည်။)
အရှေ့တီမော (တီမောလက်စတစ်) တို့ဖြစ်ပါသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Continents: What isaContinent?။ National Geographic။ Archived from the original on 2009-06-29။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "NatlGeo" defined multiple times with different content
↑ (2005, Golson Books Ltd.) in R. W. McColl: 'continents' - Encyclopedia of World Geography, Volume 1, 215. Retrieved on 2012-06-26. “အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက်တို့သည် စူးအက်ကျွန်းဆွယ်ဖြင့် ထိစပ်ဆက်သွယ်နေသောကြောင့် ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက်တို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ အာဖရို-ယူရေးရှား သို့ ယူရာဖရေးရှား ဟု တစ်ပေါင်းတည်း ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။”
"https://my.bywiki.com/w/index.php?title=တိုက်&oldid=341971" မှ ရယူရန်